ProOpinion: Joinha Bhizinesi Nharaunda Inotungamirwa Nekutsvaga | Martech Zone
ProOpinion: Joinha Bhizinesi Nharaunda Inotungamirwa Nekutsvaga
Mugovera, Kubvumbi 25, 2015 Svondo, Kubvumbi 26, 2015 Douglas Karr
Imwe yeshanduko yatiri kuona kuburikidza newebhu ndeyekuti mahara uye emahara emasaiti masayiti anoramba achinetseka nehunhu hwezvinyorwa zvavo uye kurongeka kweruzivo rwavanogadzira. Kana zvasvika pakushambadzira sarudzo, isu tinoramba tichiona kuti nzira yakagadziriswa inoburitsa mhedzisiro. Zvakakosha kune vanopa mazano kana vashambadziri kuti vadzidze tsika, zviwanikwa, uye zvinangwa zvebhizinesi vasati vaita kurudziro yezano kana chikuva. Saizi imwe haikwane zvese.
ProOpinion inopa yakasarudzika, yekutsvagisa magetsi zvemukati, zvisingawanikwe kumwe kunhu nekuti ProOpinion ndiyo sosi yekutsvaga. Zvemukati zvakawanda, zvinowanikwa nyore, uye zvakakosha, zvine chinangwa.
Nhengo dzeProOpinion dzakazvipira kufambira mberi, zvakazvipira zvizere mukumutsa hunyanzvi, uye vanoshingirira mukutsvaga kwavo bhizimusi renyika riri nani. Kune makambani pasi rese, mhinduro yakanangana nevanhu vanoshandisa zvigadzirwa zvavo nemasevhisi akakosha kana vachiedza kuchengeta vakwikwidzi mugirazi ravo rekuona kumashure. ProOpinion inobvumira nhengo kuti dzifambise zvigadzirwa zvemberi nemasevhisi nekugovana mazano mune ongororo dzepamhepo
ProOpinion yakasununguka kujoina asi nhengo dzinogona kuwana chimwe chinhu chidiki uye nekuvandudza nzvimbo yemusika. Mimwe mibairo inozivikanwa yakawanikwa inosanganisira Amazon.com Kadhi Kadhi uye iTunes Kadhi Kadhi. Iwe unogona zvakare kupa yako yaunowana kuAmerican Red Cross. Ongororo dzeSurvey dzakatumirwa kune nhengo kana vanogona kupinda muaccount yavo pa proopinion.com kuti vatore chikamu muongororo dzepamhepo.
Kutsvaga kwako kwekutsvaga kwakakosha kwauri kunomira pano - Join ProOpinion nhasi.
Iyi hurukuro inotsigirwa yakanyorwa neni pachinzvimbo cheProOpinion.
Tags: nharaunda yebhizinesikutsvagisa bhizinesiproopinionnzanga yekutsvagisa